Waa maxay lacagaha wadajirka ah: Hawlgalka, waxqabadka iyo noocyada | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Waa maxay lacagaha maalgashiga
Casudi casals | | Lacagaha
Dad badan ayaa ku guuleystey inay keydsadaan wax ka badan sidii caadiga ahayd intii lagu jiray aafada oo hadda waxay is weydiinayaan waxa ay sameyn karaan si ay lacag badan uga helaan waxa ay horey u haysteen. Mid ka mid ah ikhtiyaarrada ugu fudud ayaa ah inaad hesho bangi kaa bixiya lacagta aad ku leedahay koontada. Kiiskan, Mid ka mid ah xulashooyinka ugu faa'iidada badan ayaa ah in qayb ka mid ah keydkeena lagu daro sanduuqa maalgashiga. Laakiin waa maxay lacagaha wadajirka ah? Sidee u shaqeeyaan?
Waxaan dooneynaa inaan cadeyno fikrada maalgelinta labada dhinac isla markaana aan si fiican u sharaxno sida ay u shaqeyso. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad ogaatid noocyada kaladuwan ee jira si loo ogaado midka noo fiicnaan kara. Haddii aad xiisaynayso mawduuca, sii wad akhriska.
1 Waa maxay sanduuqa maalgashiga iyo sida uu u shaqeeyo?
2 Noocyada maalgelinta maalgashiga iyadoo loo eegayo waxqabadkooda
2.1 Waxqabadka qaraabada
2.2 Waxqabadka gebi ahaanba
3 Waa maxay sanduuqa maalgashiga ugu fiican?
Waa maxay sanduuqa maalgashiga iyo sida uu u shaqeeyo?
Markii aan ka hadlayno sanduuq wadaag ama sanduuq maalgashi, waxaan tixraaceynaa IIC (hay'ad maalgashi wadajir ah). Waxay ku saleysan tahay kulanka maal-gashadayaasha maalgashiga kala duwan si loogu maalgaliyo qalab dhaqaale oo kala duwan. Mas'uuliyadda ficilkan waxaa loo wakiishay shirkad maareyn ah. Tani waxay noqon kartaa shirkad adeeg maalgashi ama bangi. Si kale haddii loo dhigo: Lacagaha is-dhaafsiga ahi waa maalgashi kale oo kala duwan, maaddaama ay maal-gashadaan qalab maaliyadeed oo kala duwan taas oo yareyneysa khatarta (iyadoo kuxiran nooca sanduuqa maalgashiga ee la xushay).
Dadka ka qayb qaata qayb ka mid ah sanduuqa waxaa loo yaqaan ka qaybgalayaasha sanduuqa. Ku darsiga dhammaantood waxay sameystaan ​​aabbo ay maamusho oo maamusho shirkad maareyn iyo hay'ad deebaaji ah, oo shaqadeedu tahay ilaalinta lacagta iyo dammaanadaha. Waxay kaloo qabataa howlo kale sida kormeerida iyo dammaanad qaadka maalgashiyada.
Ka dib maalgelinta mid ka mid ah maaliyaddan, kaqeybgalaha wuxuu helayaa tiro cayiman. Kuwani waxay leeyihiin qiime maaliyadeed oo kala duwan ama qiime maalin kasta, maadaama ay tahay natiijada ka dhexeysa kala-qaybsanaanta sinnaanta lagu qiimeeyay waqtiga iyo tirada saamiyada jira. Si loo helo soo celinta sanduuqa maalgashiga, waa inaad iibisaa saamiyada. Guud ahaan, iibinta waa la samayn karaa wakhti kasta, marka laga reebo lacagahaas oo xisaabtanka ku xaddidan yahay xilliyada ama taariikhaha qaarkood.
Dhowr qof ayaa isu taga iyaga oo abuuraya sanduuq ay ku midaysan yihiin hay'ad wax dhigata, sida bangiga, oo ujeeddadiisa keliya ay tahay in la ilaaliyo lacagta ama hantida. Sanduuqa maalgashiga waxaa maamula shirkad maamul oo ku takhasustay maalgashiga. Kaqeybgalayaasha, taasi waa, dadka lacagta galiyay sanduuqa, waxay helayaan boqolkiiba maalgashadooda maalinta ay rabaan inay lacagtooda halkaas ka helaan. Faa'iidada waxay ku xirnaan doontaa natiijooyinka shirkadda maamulka kaasoo ku maalgaliyay lacagtaas qalab dhaqaale oo kala duwan.
Caadi ahaan, shirkadda maamulka ayaa maalgelinaysa lacag (lacag shisheeye ama mid maxalli ah), guryaha ma guurtada ah ama hantida loo qoondeeyey hawlgalka (taas oo noqon doonta biilasha amaahda guryaha) iyo dammaanadaha ku taxan (curaarta, saamiyada, iwm.). Maalgashiga raasumaalka ka sokow, waxay kaloo mas'uul ka tahay haynta xisaabaadka, xakamaynta shirkadda keydka dhigida iyo sameynta daabacaadyo sharci ahaan loo baahan yahay. Dhinaca kale, shaqada kaliya ee shirkadda deebaajintu waa inay ilaaliso qalabka iyo dammaanadaha matalaya maalgashiga. Labada shirkadoodba waa inay xakameeyaan in dhammaan tilmaamaha xeerarka maaraynta la buuxiyo.
Gabagabadii, maalgalinta wadajirka ah ama maalgalinta maalgashiga waxay siisaa dhexdhexaadiyeyaal yar iyo badbaado suurtagalnimada kordhinta keydkooda iyadoo loo marayo kaqeybgalka suuqa caasimada. Waxay tan ku sameeyaan isla xirfad iyo shuruudo la mid ah maalgashadayaasha waaweyn.
Noocyada maalgelinta maalgashiga iyadoo loo eegayo waxqabadkooda
Waxaa jira laba nooc oo kaladuwan oo lacag ah, oo kuxiran waxqabadkooda. Marka ugu horeysa waxaa jira midka qaraabada ah, oo waxqabadkiisu laxiriira tusmo, sidoo kale loo yaqaan 'Benchmark', waxaana lagu gaaraa waqti go'an. Kuwani waa maalgalinta dhaqameed ee ugu caansan oo maalgashigiisu aan khatar badan lahayn, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin guddiyo ka yar.
Marka laga hadlayo fasalka saxda ah, ma jiro wax calaamadeeya oo qiimaha maalgashiga waxaa lagu cabiraa qiimaha lacageed. Maalgelinta maal gashiga ee noocan ahi aad ayey qaali u tahay ka qayb galahana ma garanayo waxa ay maalgashan doonaan. Badanaa waxay isticmaalaan dhammaan noocyada farsamooyinka maal-gashiga, sida waxyaabaha ka dhasha, jagooyinka gaagaaban, iwm. taas oo kordhinaysa halista maalgashiga.
Markaan ka hadlayno maalgalinta maalgalinta oo leh waxqabad qaraabo ah, kaqeybgalayaashu waxay aqoon u leeyihiin aag juquraafi ahaan halka ay maalgashiga ku sameyn doonaan iyo qalabka maaliyadeed, sida alaabada ceeriin, keydka, tusmada saamiyada, bonds, iwm. Waxaa sidoo kale la ogeysiiyaa markii go'aanka la gaarayo in diiradda la saaro qayb suuq gaar ah, sida tikniyoolajiyadda, dawooyinka, iwm. Maxaa intaa ka badan, deji qiimaha adoo adeegsanaya Benchmark taas oo inta badan la xiriirta tusmooyin cayiman. Waxqabadka qaraabada waxaa loo qaybin karaa laba kooxood, iyadoo kuxiran maamulka:
Maamulka firfircoon: Lacagaha maalgalinta dhaqameed ee kharashkoodu badanaa yahay 2% guddiyada waxa la maalgaliyo.
Maamulka dadban: Index ayaa maalgelisa tusmada oo qiimaheeda uu ku dhow yahay 1% maalgashiga iyo Isweydaarsiga Ganacsi ee Sarrifka (ETF), oo sidoo kale adeegsada farsamooyin maalgashi oo horumarsan kharashkiisuna yahay 0,5% maalgashiga.
Sida lacagta loo maalgashado
Waxqabadka gebi ahaanba
Guud ahaan, waxsoosaarka saxda ah waxaa maamula dillaaliin. Xaaladahan oo kale, maalgashadayaashu si sax ah uma yaqaanaan waxa ay qorsheynayaan inay maalgashadaan. Maxaa intaa ka badan, farsamooyinka maalgashi ee ay adeegsadaan waxay u muuqdaan kuwo mala awaal ah, sidaas awgeed khatarta sii kordheysa. Xaaladahan waxaa jira lacagaha soo socda:
Sanduuqa Hedge ama Sanduuqa Hedge: Waxay yihiin lacag loogu talo galay hay'adaha sida guryaha waaweyn ama lacagaha kale ee maalgashiga. Guddiyadu way sarreeyaan khatartooduna aad bay u sarreysaa, maadaama ay deyn ku geli karaan si ay u sameeyaan maalgashiyo khatar sare leh, sida jagooyinka gaagaaban.
Lacagaha maareynta kale: Waxay leeyihiin soo-celin sare, laakiin halistu sidoo kale way badan tahay.
Waa maxay sanduuqa maalgashiga ugu fiican?
Aad ayey u adag tahay in la yiraahdo kan ugu fiican sanduuqa maalgashiga, maxaa yeelay waxay ku xirnaan doontaa xaaladda qof walba. Sidaa darteed, waxaa jira tiro badan oo noocyo kala duwan ah. Waxaa loo kala saari karaa iyadoo loo eegayo halistooda, xirfadda maalgashiga, aag juquraafi ama nooca soo noqoshada. Si kastaba ha noqotee, midka ugu caansan waa midka loogu talagalay xirfadda maalgashiga. Qeybtaan dhexdeeda noocyadan ayaa soo baxay:
Lacag maalgelin dakhli oo go'an
Maalgelinta maalgashiga sinnaanta
Maalgelinta maalgashiga caalamiga ah
Lacagaha maalgashiga ee isku dhafan
Lacag damaanad qaad ah
Sanduuqa Hedge (sanduuqa sanduuqa ama maareynta maareynta kale)
Miisaaniyada tusmada ama lacagaha tusmada
Sanduuqa maalgashiga lacagta
Waxaan rajeynayaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad fahanto waxa ay isku mid yihiin. Iyagu waa beddel wanaagsan oo loogu talagalay kuwa aan suuqa si fiican u fahmin ama aan si fudud u helin waqti ay ku sii socdaan, laakiin doonaya inay lacagtooda ku shaqeeyaan si kastaba ha noqotee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Lacagaha » Waa maxay lacagaha maalgashiga
Sida loo barto maalgashiga suuqa saamiyada